यति गर्नुभयो भने तपाईको एटीएम कार्ड सुरक्षित हुन्छ! – Banking Khabar
यति गर्नुभयो भने तपाईको एटीएम कार्ड सुरक्षित हुन्छ!
बैंकिङ खबर ।अटोमेटिक टेलर मेसिन नै एटिएम हो । एटिएमलाई अन्तराष्ट्रिय बैकिङ भाषामा प्लाष्टिक मनी भनिन्छ । यस कार्डले खल्तीमै पैसा हाले सरह काम गर्दछ । विकसित मुलुकहरुमा यसको प्रयोग बढ्दो रुपमा भएको छ भने नेपालमा सिमित मात्रामा भएको पाईन्छ । एटिएमबाट आफुले बैंकमा जम्मा गरेको रकम चाहेको समयमा छिटो तरिकाले झिक्न सकिन्छ ।
एटिएम कार्ड गर्दा अपनाउनुपर्ने साबधानीहरु
एटिएम कार्डको पिन नम्बर थोरै भिन्न राख्नुहोस । अधिकांश मानिसहरु पिन नम्बरमा आफ्नो नाम, फोन नम्बर, वा टेलिफोन नम्बर सेट गर्छन । यस्तो गल्ति कहिले पनि नगर्नु होस् । यस्तो नम्बरहरु अनुमानको आधारमा पनि ह्याक गर्न सहज हुन्छ